बागलुङमा मतदान शान्तिपूर्ण : ६५ देखि ७० प्रतिशत मत खसेको अनुमान ! – ebaglung.com
बागलुङमा मतदान शान्तिपूर्ण : ६५ देखि ७० प्रतिशत मत खसेको अनुमान !
२०७४ बैशाख ३१, आईतवार १८:२५	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
बागलुङ २०७४ बैशाख ३१ । बागलुङ जिल्लाका ४ नगर र ६ गाउपालिकाहरुका १९२ मतदान केन्द्रहरुमा मतदान कार्य शान्ति एवं सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको छ । मतदानमा मतदाताहरुले उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाएका थिए । प्राप्त जानकारी अनुसार जिल्ला भरका मतदान केन्द्रहरुमा कुनै अपिय घटना घटेको छैन ।
विभिन्न मतदान केन्दहरुमा खसेको मत प्रतिशतका बारेमा समाचार आउनेक्रम जारी रहेको छ । जिल्लामा सरदर ६५ देखी ७० प्रतिशत मत खसेकेो प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकृत विकासचन्द्र पौडेलले बागलुङ नगरपालिाका र जैमिनी नगरपालिकाको जनाकारी आएको बताउदै जिल्लामा ७० प्रतिशत मत खसेको अनुमान गरिएको बताए ।
काठेखोला गाउपालिका ५ विहुँ अमरभूमि उमाविमा मतदान केन्द्रमा ६८ प्रतिशत मत खसेको सहकर्मी केशव विकले जानाएका छन् । यस केन्द्रमा २१२५ मतदाताहरुमा १४ सय ५४ मतदाताले मतदान गरेको मतदान अधिकृत धु्व गिरीले जानकारी दिए ।
उता ताराखोला गाउपालिकाको ५मा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको छ । यस मतदान केन्द्रमा १५सय२६ मतदाता रहेकोमा ११ सय ३९ जनाले मतदान गरेका थिए । जस्मा पुरुष मतदाताको संख्या ५ सय १८ र महिलाको संख्या ६ सय २१ रहेको थियो । परिचय पत्र लिएर पनि १ सय ३७ जना मतदाताहरुले मतदानमा भाग नलिएको सहकर्मी खगेन्द्र विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
उता बडीगाड गाउपालिकाको खर्वाङ केन्द्रमा १५ सय ३२ मतदाता रहेकोमा १ हजार ६० जनाले मतदान गरेका छन् ।
उता निसीखोला गाउपालिका ३ को प्रभा मावि केन्द्रमा दुई मतदानकेन्द्रमा जम्मा मतदाता संख्या १८ सय ३ रहेकोमा १२ सय ८४ जनाले मतदान गरेको सहकर्मी लोकेन्द्र निरासीले जानकारी दिए । यसैगरी निसीखोला गाउपालिका ४ को जन मावि केन्द्रहरुमा कुल १७ सय ६० मतदातामा ११ुउ ६८ मत खसेको छ भने वडा नं ६ को मतदान केन्द्रमा १८ सय मतदाता मध्य ११ सय ९ जनाले मतदान गरेका छन् । निसीखोला गापालिकाका सबै मतदान केन्द्रहरुबाट मतपेटिकाहरु गाउपालिकाको केन्द्र जुग्जाखोलामा आईपुगेको छ । निरासीका अनुसार सर्वदलीय बैठक पछी म.आजै मतगणना गरिने छ । यहाँ ७२ प्रतिशत मतदान भएको छ ।
सहकर्मी वीर चोखालले दिएको जानकारी अनुसार गल्कोट नगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा१६५४, वडा नम्बर २ मा १२५८, वडा नम्बर ३ मा १५१४, वडा नम्बर ४ मा १०४७, वडा नम्बर ५ मा १२३५ , वडा नम्बर ६ क मा ४९६ वडा नम्बर ६ ख( मा ३९५ वडा नम्बर ७ मा– ९१६, वडा नम्बर ८ मा (१०७५, वडा नम्बर ९ क मा ४७० वडा नम्बर ९ ख मा ५५५, वडा नम्बर १०( मा १११९ वडा नम्बर ११ मा १६८२ गरी जम्मा १३४१६ मतदाताले मतदान गरेका छन् ।
बुर्तिवाङबाट सहकर्मी छविलाल पाण्डेले पठाएको विवरण अनुसार पश्चिम बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालीकामा ११ हजार ९ सय ९० मतदाता मध्ये ८ हजार पाँच सय २८ जनाले मतदान गरेका छन् जसमध्य महिला ४ हजार ८ सय ७८ र पुरुष ३हजार ६ सय ५० जनाले मतदान गरेको बताईएको छ ।
९ वडका १५ मतदान केन्द्रमा भएको मतदान प्रकृया मर्यादित रुपमा सम्पन्न भएको निर्वाचन कार्यालय ढोरपाटन नगरपालीकाका निर्वाचन अधिकृत केदार नाथ पौडेलले बताए । अहिले सर्वदलीय बैठक बसिरहेको र मतगणना कसरी गन्ने कतिखेर देखि गन्ने बिषयमा सर्वदलीय छलफल भईरहेको नगरपालीका प्रमुख राम प्रसाद आर्चायले बताए ।
उता निसि गाँउपालीकामा १२ हजार १ सय ९७ जना मतदाता रहेको गाँउ पालीकामा ँ ८ हजार ३ सय १७ मत खसेको बताईएको छ । मतपेटीका पुरै निर्वाचन कार्यालयमा नआएका कारण त्यहाँ पनी कतिखेर देखि मतगणना गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल गर्ने तयारी भएको बताईएको छ । ७ वडामा गरी १७ वटा मतदान केन्द्रमा मर्यादित रुपमा निर्धारीत समयमा निर्वाचन सम्पन्न भएको निर्वाचन अधिकृत बिष्णु भतm रञ्जितले बताए ।
उमेद्वार खिम बिक्रम शाहि र स्वतन्त्र उमेद्वार प्रकाश कुवँरको प्रमुख पदमा चर्चा छ ।
तमान गाँउ पालीकामा ५ हजार ९ सय २८ मतदाता मध्य चार हजार ९ सय ६५ जनाले मतदाता परीचय पत्र लिएका थिए । जसमा ४ हजार २ सय ९ जनाले मतदान गरेका छन् ।
त्यस्तै बडिगाड गाँउ पालीकामा कुल मतदाता १७ हजार २ सय २७ मध्ये १३ हजार ८ सय ७५ जनाले मतदाता परीचय पत्र लीएपनी कुल ११ हजार ८ सय ५७ जनाले मतदान गरेका छन् । जसमा ५ हजार ८१ पुरुष र ६ हजार ७ सय ७६ गरी ६८.८३ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका हुन् ।
जहाँ १० वडामा २१ मतदान केन्द्र रहेका हुन् । त्यहा पनी मर्यादित रुपमा मतदान सम्पन्न भएको निर्वाचन अधिकृत रामचन्द्र शर्माले बताए । सबै वडाबाट साँझसम्म मतपेटिका आएपछि आजबाटनै मतगणना सुरु हुने बताईएको छ ।
तस्वीर- ताराखोला गाउपालिका ५ को मतदान केन्द्र ।
भीषण हुरी बतास र असिना-पानीले मतदान कार्य प्रभावित !